I-Super central luxury mini studio - Indawo yokupaka yamahhala - I-Airbnb
I-Super central luxury mini studio - Indawo yokupaka yamahhala
Lesi situdiyo esiphakathi nendawo esikhulu siyindawo enhle yokuhlala uma ufuna indawo ephambili kodwa ethengekayo e-Chamonix. Ku-13 sqm kuphela unombhede ophindwe kabili, ikhishi elifakwe kahle kanye negumbi lokugezela. Indawo yokupaka engaphansi komhlaba yamahhala imizuzu emi-3 kuphela ukusuka efulethini. Isendaweni engekho ngaphezu kwamamitha angama-30 ukusuka emgwaqeni omkhulu indawo iphelele, imaphakathi kodwa ithule. Amabha, izindawo zokudlela nezitolo eduze nje ekhoneni. Isitimela, i-Mont-Blanc Express, sima esiteshini i-Aiguille du Midi amamitha angu-20 ukusuka emnyango.
Leli fulethi lincane - imitha yesikwele eyi-13 kuphela. Noma kunjalo iqukethe ikhishi elihlome kahle eline-hob, i-microwave, ifriji, umshini wekhofi we-Nespresso, i-kitchenware. Umbhede ungumbhede ophindwe kabili ongu-140 cm onendawo enkulu yokugcina ngaphansi. Indlu yokugezela ifakwe ishawa, indlu yangasese nosinki. Umhume omkhulu ozimele endaweni engaphansi ukunika ithuba lokugcina amapotimende namagiya ezemidlalo.
4.84 · 80 okushiwo abanye
Ifulethi litholakala ngemuva nje komgwaqo omkhulu waseChamonix. Emaphakathi kodwa ethule.